Akụkọ Hyperbaric - Tekna Hyperbaric Na-asụ Asụsụ Gị!
Hyperbaric News - Tekna Hyperbaric Na-asụ Asụsụ Gị!
Home/Posts/Foto ntanetị/Hyperbaric News - Tekna Hyperbaric Na-asụ Asụsụ Gị!
Tekna Na-asụ Asụsụ Gị!
Tekna Ụlọ Hyperbaric A na-asụgharị weebụsaịtị na asụsụ 105 n'asụsụ dị iche iche nke ọ bụla n'asụsụ nke onwe ya. Ndị ọhụrụ asụsụ Gọọmentị na ebe nrụọrụ weebụ na-enye Tekna Ahịa Online na Ngalaba Ahịa iji soro ndị ahịa bara uru na-asụ asụsụ ha n'ụwa nile.
Ọtụtụ weebụsaịtị na-eji Google Translate ma ọ bụ ndị ọzọ na-asụgharị ndị nsụgharị nke nwere ike ime ka ndị ahịa ha nwee nkwenye na-adabere na njehie nsụgharị na nsogbu asụsụ nke ndị nsụgharị ndị a na-emepụta.
Anyị na-atụ anya na anyị ga-ahọrọ iji Usoro Nhazi mee ka mmekọrịta gị na Tekna dịkwuo mfe karị ma nwekwuo obi ụtọ.
By teknamfg|2018-01-29T12:54:26+00:00December 16th, 2017|Foto ntanetị|Comments Off na Hyperbaric News - Tekna Hyperbaric Na-asụ Asụsụ Gị!
Banyere chepụtara: teknamfg